Maxay tahay awoodda ay u leedahay Manchester United inay heshiis cusub ka saxiixato Paul Pogba? – Gool FM
Maxay tahay awoodda ay u leedahay Manchester United inay heshiis cusub ka saxiixato Paul Pogba?
(Manchester) 30 Abril 2020. Heshiiska uu Paul Pogba hadda kula jiro kooxda Manchester United ayaa dhici doona xagaaga 2021, hase ahaatee, waxaa heshiiskii hore ku jira qodob u ogolaanaya kooxda Ingiriiska ah inay sanad kale ku kordhiso qandaraaskiisa xilli ay doorasho u leedahay inay mushaharkiisa sare u qaaddo iyo inay sidii ku deyso.
Heshiiskan hal-geesoodka ah ayaanan laga ogoleyn dalalka qaar oo uu ka mid yahay dalka Spain, balse waxaa heshiiska noocan ah ku caan baxay kooxaha Ingiriiska, gaar ahaan Manchester United iyo Chelsea.
Tani ayaa la micno ah in United ay cusbooneysiin karto qandaraaska laacibka Faransiiska ah haddii aysan dooneyn inay xagaagan iibiso.
Waxaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay saxaafadda ka faalloota sheekooyinka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaaradda Yuruba ay qorayeen in Red Devils uu cadaadiska ku badanayo mar walba oo lagu sii dhowaado dhammaadka heshiisyada ciyaartoydeeda muhiimka ah sida Pogba.
Qorshaha kubbad qaabeeyahan ayaa ahaa inuu ka soo kabsado dhaawaca uu garoommada kaga maqan yahay si uu kaga qayb qaato koobka qaramada qaaradda Yurub ee Euro 2020 inkastoo dib 12 bilood dib loo dhigay, ka hor inta uusan ka tagin Old Trafford, xilli Real Madrid iyo Juventus ay il gaar ah ku eegayaan xaaladda mustaqbalkiisa.